Ankizy Libyana Tsy Nisy Sekoly Nandritra Ny Volana Vitsivitsy, Vehivavy Iray No Nanatona Nampianatra Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Ankizy Libyana Tsy Nisy Sekoly Nandritra Ny Volana Vitsivitsy, Vehivavy Iray No Nanatona Nampianatra Azy Ireo
Voadika ny 02 Marsa 2015 2:34 GMT
Vakio amin'ny teny Swahili, Français, Español, বাংলা, عربي, 日本語, English
Ankizy tao Tripoli tamin'ny volana Aogositra 2011. Sary avy amin'ny MITSUYOSHI IWASHIGE. Zon'ny mpamorona, Demotix
Nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 26 Febroary 2015 ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Shirin Jaafari hoan'ny The World ity ary navoaka indray noho ny fifanarahana fifampizarana vontoaty.
Satria rotiky ny revolisiona tamin'ny 2011 i Libya, nandao ny firenena handeha ho any Etazonia i Haifa El-Zahawi.
Mitady asa izy ankehitriny rehefa lasa mpitsabo nify, Saingy milofo mafy manatanteraka tetikasa isan-karazany ihany koa izy: Mampianatra ireo ankizy ao Libya.
Nahatonga ireo ankizy ho tsy afa-nianatra hatramin'ny volana Oktobra ny toe-draharaha tsy zarizary ao. Ka rehefa tsy afaka mamonjy ny sekoliny ireo ankizy, dia nieritreritra i El-Zahawi hoe maninona moa raha omena azy ireo ny fampianarana? Teraka ny Sekoly Skype Bengazi avy eo.
“Natombokay tamin'ny kaontin'ny tena manokana sy ny Skype izany,” hoy i El-Zahawi avy ao New York. Namoaka ny tetikasany tao amin'ny haino aman-jery sosialy izy, nanontany raha afaka manampy azy ny Libyana. Tao anatin'ny herinandro, nahazo “valin-teny tsara marobe izy.” Nahare mihitsy aza izy fa te hanohana ny tetikasany ny orinasam-pifandraisandavitra iray ao Libya .
Mazava loatra fa manana ny olany manokana ny fampianarana amin'ny aterineto. Olana goavana ny hantsan'ny fifandraisana an'aterineto, tahaka izany koa ny fahatapahan-jiro matetika atrehin'ny Libyana. “Miezaka sy manao izay hisian'ny [kilasy] araka izay vitanay izahay, saingy noho ny olana … dia miezaka mandrakitra ireo lesona ary mandefa izany amin'ny aterineto izahay,” hoy i El-Zahawi.
Saingy na dia teo aza ireo zava-tsarotra, nahitam-pahombiazana hatramin'izao ny Sekoly Skype Benghazi. “Mandefa ny sarin'ireo ankizy manao ny entimodiny ireo fianakaviana,” hoy i El-Zahawi. “Manao ny fanamian'izy ireo any am-pianarana mihitsy aza izy ireo indraindray.”
Ny hevi-dehibe ambadiky ny sekoly hoy i El-Zahawi dia ny hitondra fanantenana ho an'ireo fianakaviana sy ankizy izay “tena mila izany.” Manahy tokoa izy momba ireo vaovao toy ny fanapahan-doha vao haingana nihatra tamin'ireo andian-dehilahy ao Libya teo am-pelantanan'ny ISIS, ary manantena izy fa hanampy amin'ny fampitsaharana ny fihanaky ny fahatongavana any amin'ny hiringiriny ny fanabeazana ireo ankizy Libyana.
“Tsy maintsy mampianatra sy manabe ny ankizintsika isika,” hoy izy, “Amin'ny alalan'ny fianarana ihany, no ahafahantsika mitolona.”